व्यक्ति : माननीय उमादेवी वादी- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
व्यक्ति : माननीय उमादेवी वादी
भाद्र २८, २०७६ जनक नेपाल
उमादेवी अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य छिन् । उनीप्रति बादी मात्र होइन, सीमान्तीकृत समुदायको भरोसा छ । ३१ साउन ०६४ । उमादेवी बादीले सायदै बिर्सनेछिन् । बाध्यात्मक यौन शोषणको विरोधमा उनकै नेतृत्वमा बादी समुदायले सिंहदरबार गेटमै चढेर अर्धनग्न प्रदर्शन गरेका थिए ।
दलितभित्र पनि दलित मानिने बादीको मुद्दाले सोही प्रदर्शनपछि मात्र सिंहदरबारमा प्रवेश पाएको थियो । उनै उमादेवी अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य छिन् ।
बादी समुदाय वर्षौंदेखि जातीय विभेद, यौन शोषण र छुवाछूतको जाँतोमा पिसिँदै आएको छ । त्यही समुदायबाट उठेर माननीय भएकी उमादेवीसँग बादी मात्र होइन, सीमान्तीकृत समुदायको भरोसा छ । प्रतिपक्ष कित्तामा छिन् उनी । त्यसैले समस्या उठाउन पार्टीका कुनै ह्विप छैन । ‘संसद्मा बोल्न पार्टीको रोक छैन’ ५९ वर्षीया भन्छिन्, ‘पीडा त बरु सत्तापक्षका साथीहरूलाई रहेछ । प्रतिपक्षले जस्तो बोल्न मिल्दैन रे ।’
डेढवर्षे प्रदेशसभा अभ्यासमा उनी जतिपटक बोलिन्, बादी, दलित, राजी, सोनाहा र मुस्लिमका समस्या उठाइन् । पार्टीले सीमान्तीकृत समुदायका विषय आउँदा उनलाई नै बोल्न भन्दो रहेछ । मानौं पार्टीका अरू सांसदले यी विषयबारे बोल्नै हुँदैन । उमादेवीलाई आफ्नोजस्तै आवाजविहीन समुदायका कुरा प्रदेशसभामा राख्दा सन्तोष लाग्छ रे । ‘गरिब दुःखीका कुरा उठाइदिन मलाई भेट्न आउँछन् । मैले उनीहरूका कुरा संसद्मा पुर्‍याइदिन्छु,’ उनी भन्छिन् ।
उमादेवीको घर टीकापुरमा छ । कांग्रेसले प्रदेशसभा सदस्य मनोनीत गरेपछि उनी धनगढी गइन् । केही दिन होटल र आफन्तको घरमा बसेपछि डेरा खोजिन् । सांसदले डेरा पाउन मुस्किल थिएन । उनले पनि कोठा पाइन् । घरेबेटीले पछि थाहा पाएछन्, सांसद त बादी परिछन् । घरेबेटी पढालेखा थिए, पत्नी महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका । तर, सोच पुरानै युगमा रहेछ । उमादेवीको कोठा छेउमै धारो थियो, त्यो नजिकै पूजाकोठा । एक दिन घरेबेटीले भनिछन्— हाम्रा त देउता कडा छन्, नछोइदिनुहोला । अर्को दिन धारोमा त्यस्तै छोइछिटो । उकुसमुकुस धेरै दिन चलेनछ । कोठा खाली गराउने जुक्ति निकालिछन्, ‘छोराबुहारी आउने भए । कोठा खाली गरिदिनुपर्ने भयो ।’
जिन्दगीभर छुवाछूत, विभेद र शोषण बेहोर्दै आएकी उमादेवीले नबुझ्ने कुरै थिएन् । तर, कुनै प्रतिवाद गरिनन् । हाँसीहाँसी कोठा खाली गरिदिइन् र अन्यत्र सरिन् । पछि थाहा पाइन्, छोराबुहारीका लागि खाली गरिदिएको कोठामा अरू नै सरेछ । ‘जात थाहा नपाउँदासम्म दलितले पनि कोठा पाउँछन् । थाहा पाए कि छाड्नुपर्छ । दलितलाई सुदूरपश्चिममा धेरै गाह्रै छ,’ उनी भन्छिन् ।
संसद् पुग्नुअघि उमादेवीलाई सडकभन्दा सदन ठूलो लाग्थ्यो रे ।
सडकको आवाजभन्दा संसद्को आवाज बलियो लाग्थ्यो । तर, हैन रहेछ । डेढ वर्षपछि उनलाई लाग्न थालेको छ, सडक र सदन उस्तैउस्तै रहेछन् । जसले ठूलो आवाज गर्न सक्यो, उसैको कुरा सुनुवाइ हुने । सानो आवाजले, तल्लो वर्ग वा सीमान्तकृतको आवाज सदन र सडक दुवै ठाउँ मधुरो हुने रहेछ । नसुनिने रहेछ ।
बरु सडकको आवाज दरिलो लाग्न थालेको छ । ढिलोचाँडो काम गर्ला, तर सशक्त आवाज रोक्ने सामर्थ्य सरकारसँग हुँदैन । त्यतिबेला पनि ३१ साउनदेखि सुरु आन्दोलन २८ असोजमा सम्झौतामा टुंगिएको थियो । सिंहदरबार प्रदर्शनपछि सरकारसँग २६ बुँदे सम्झौता गरियो । सम्झौतापछि नागरिकता सहज भयो । सरकारले आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो । विगतमा प्रशासनका अधिकारीले हेपेर राखेका जथाभावी थरहरू भाड, बदेनी, पातर सच्याइए । भूमिहीन बादीलाई घर बनाइदिने भनियो । तर, निकै सुस्त काम भइरहेको छ ।
२३ पुस ०६५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाध्यात्मक यौनशोषणमा परेका महिलालाई आयआर्जनसहित पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । आश्रित बालबालिकालाई शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने भनिएको थियो । बादी उत्थान समिति, बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा र यौन शोषणबाट मुक्तिको घोषणा गरियो ।
कुनै बेला सल्यानमा मात्र सीमित बादी समुदाय अर्धफिरन्ते जातिका रूपमा पूर्वमा गोरखादेखि पश्चिममा कमाउ गढवालसम्म पुगेका थिए । पछिल्लो जनगणनाअनुसार, बादीको जनसंख्या ५५ हजार धेरै छ । ती सबै घोषणा कार्यान्वयन भइसकेका छैनन् । भएका काम पनि सुस्त छन्, योजनाहरू कनिका छरेझैं भए । लगत लिएर समस्याको दिगो समाधान खोज्नेभन्दा थुमथुमाउने काम मात्र भएको बादीहरूको बुझाइ छ ।
उमादेवीले संसद्मा जतिपटक बोले पनि तल्लो वर्ग समुदायलक्षित कार्यक्रम परेनन् । सत्ता–प्रतिपक्षको तानातानमा झन्डै तीन साता संसद् अवरुद्ध भयो । रातो किताब जलाइयो । अनि, सहमतिपछि संसद् सुचारु भयो । तर, सीमान्तकृतका माग सम्बोधन भएनन् । ‘जति बोले पनि नसुनिने रहेछ । मैले त झल्झली सडक सम्झिरहेको छु । सडकमा जे दम छ नि, त्यो सदनमा नहुँदो रहेछ,’ उमादेवी भन्छिन् ।
बाह्र वर्षअघिको त्यो आन्दोलन कुनै रहरले गरिएको थिएन । जातीय विभेद र यौन शोषणबाट मुक्तिका लागि अर्धनग्न प्रदर्शन गर्नुपरेको उनी बताउँछिन् । उमादेवी भन्छिन्, ‘ज्ञापनपत्र, विरोध जुलुस र र्‍याली त कति गरिए, गरिए । हाम्रा कुरै नसुनिएपछि बाध्य भएर सिंहदरबारमै पुगेर वस्त्र खोल्नुपरेको थियो ।’
बादी संघर्षको कथा कम मार्मिक छैन । कैलालीको सती बजारका बादी महिला यौनकर्म गर्न बाध्य थिए । आफ्ना चेलीबेटीलाई शोषणबाट मुक्त गर्न त्यहाँका युवाले अभियान चाले । आत्मनिर्भर हुन र जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाउन सामुदायिक सहयोग समिति बनाए । उमादेवीले सोही संस्थाको ब्यानरमा देशव्यापी आन्दोलन उठाएकी हुन् । ‘महिलाले आफू शोषणमा परेर परिवार पाल्नुपर्ने । भाइछोरालाई त्यो देखी साध्य नभएपछि आन्दोलन थालियो,’ उनी सुनाउँछिन्, ‘आफैं गरी खाऊँ भन्दा न जग्गा छ, न सम्मान छ । गाउँमा बस्न नसकेर युवाहरू भारत जानुपर्थ्यो ।’ यौन शोषणको अन्त्यपछि बादी समुदायले शोषणबाट थोरै भए पनि मुक्ति र आत्मसम्मान पाएको उनी बताउँछिन् ।
३० वर्षअघि काठ व्यवसायीका रूपमा टीकापुर पुगेका बर्दियाका प्रेमलाल भट्टसँग उनले अन्तर्जातीय विवाह गरिन् । उनीहरूका दुई छोरा र एक छोरी छन् । श्रीमान्ले स्विकारे पनि परिवारले नस्विकार्दा लामो समय समस्या भोग्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै उनी भन्छिन्, ‘परिवर्तनका लागि समय लाग्दो रहेछ । धैर्य गरेरै यो सम्बन्धलाई बचाउन सकेकी हुँ ।’
उमादेवीले अझै हिम्मत हारेकी छैनन् । सरकारी रवैया देख्दा उनलाई बारम्बार सडकमा ओर्लिनुपर्ने दिन आउलाजस्तो लाग्छ । संसद्मा बोल्छिन्, सुनिँदैन । तल्लो वर्गको भरोसा लिएर हिँड्दा कुनै सम्बोधन नभए आफू असफल हुने भयले पनि उनलाई सताइरहन्छ । सँगै, प्रदेशसभा पुगेर थुप्रै उपलब्धि हासिल भएकोमा उनी खुसी छिन् । भन्छिन्, ‘संसद् के हो थाहै थिएन । बोल्न त सिकियो नि।’
प्रजातन्त्रका लागि भएको क्रान्तिका एक सेनानी श्याम तामाङलाई अहिले पनि त्यसबेला मारिएका १६ जनाको उपेक्षा भएको देख्दा चित्त दुख्छ ।
चैत्र ९, २०७५ जनक नेपाल
काठमाडौँ — राणा शासनविरुद्ध कांग्रेसले गरेको २००७ सालको सशस्क्र त्रान्तिका एक योद्धा श्याम तामाङ अहिले ८८ वर्षका भए  । क्रान्तिभर उनी तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका कमान्डर पुरन सिंहका प्रमुख स्वकीय सचिवसरह थिए  ।
बैठकको माइन्युट लेख्ने, भारतीय जेलमा रहेका लडाकुको मुद्दा लड्ने माक्र होइन त्रान्तिकारीलाई घरखर्च र पकेटमनीसमेत उनै तामाङले वितरण गर्थे ।
तामाङ दार्जिलिङको खर्साङ माविमा पढ्दै थिए । कांग्रेस नेताहरू स्कुल–स्कुलमा संगठन खोल्न आउँथे । गोर्खा समुदायलाई उनीहरू राणाको ज्यादती र क्रान्तिको आवश्यकताबारे बताउँथे । शिक्षकहरूले पनि स्कुलमा यस्तै कुरा गर्थे । बारम्बार एउटै कुरा सुनेपछि तामाङको मनमा पनि विद्रोही भावना जागेको थियो । १८/१९ वर्षका तामाङ एक दिन स्कुलमा आएका नेता पुरन सिंहको पछि लागे ।
पुरन सिंह र उनका साथीहरूले कालिङपोङ, खर्साङ र दार्जिलिङका थुप्रै युवाहरूलाई एकजुट बनाएर गोरखपुर लैजादै थिए । गोरखपुर नपुग्दै उनीहरू भारतीय प्रहरीको घेराबन्दीमा परे । सुरक्षा कडा पारिएको थियो । उनीहरूलाई बसेको ठाउँबाट बाहिर निस्कनसमेत दिइएन । त्यसको रहस्य तामाङले पछि मात्र थाहा पाए । खासमा त्यो दिन नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर नयाँ दिल्ली जाँदै रहेछन् । मोहनशशमेर काठमाडौंबाट घोडामा वीरगन्ज पुगेका थिए । उनलाई लिन रक्सौलसम्मै विशेष रेल आउँथ्यो । रेलमा राणाबाहेक अरू यात्रु हुँदैनथे । त्यो रेल नै बम पड्काएर उडाइदिने योजना चुहिएपछि मुक्ति सेनालाई एक हप्तासम्म बाहिर निस्कनै दिइएको थिएन । मोहनशमशेर दिल्ली पुगेर फर्किएपछि माक्र जनमुत्ति सेनाले हिँडडुल गर्न पाएको तामाङ सम्झिन्छन् ।
‘त्यतिबेला मोहनशमशेरलाई भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपाली कांग्रेसले क्रान्ति सुरु गर्न लागेको जनाउ दिएर भनेका थिए रे— क्रान्ति भयो भने राणा शासन जोगिन्न । कांग्रेससित मिलेरसरकार बनाऊ । पार्टी खोलेर चुनावबाट सरकारमा आऊ, बरु चुनाव जित्ने तरिका हामी सिकाउँला,’ तामाङले भने, ‘मोहनशमशेरले त्यो सल्लाह रुचाएनन् । रैतीसँग मिलेर त कसरी शासन गर्ने ? हाम्रो त बेइज्जत हुन्छ भनेछन् ।’
क्रान्तिलाई दाजुभाइको एक–एक करोड
भारतको पटना बसेर क्रान्तिको तयारी गरिरहेका बीपी कोइराला विराटनगर जुटमिलको हडतालपछि भएको धरपकड र गिफ्तारीपछि सशस्क्र त्रान्तिका लागि तयार भएको तामाङको भनाइ छ । पटना बैंकरोडको गान्धी मैदान छेउमा बीपीको निवासको हलमा कांग्रेसको बैठक बस्थ्यो । हलमा कुर्सी थिएन, दरी बिच्छाइएको हुन्थ्यो । त्यसैमा सेतो तन्ना ओछ्याएर नेताहरू बस्थे । ‘अरू त सजिलै बस्थे, सुवर्णशमशेर भने दरीमा बस्न निकै अप्ठ्यारो मान्थे । राणा न परे, पलेटी मार्नै सक्दैनथे । बैठकमा दुई घण्टा काट्नै मुस्किल पर्‍थ्यो,’ तामाङ भन्छन् । सशस्क्र त्रान्तिको योजना कलकत्ताको फोटी चौरङ्गीमा रहेको सुवर्णशमशेरको १० तले घरमा बनेको तामाङ स्मरण गर्छन् । बैठकमा क्रान्तिको खर्च कसरी जुटाउने, हतियार कसरी जुटाउने, फ्रन्ट लाइनमा को लड्ने भन्नेबारे छलफल चल्यो । सुवर्णशमशेरले सोधे, ‘क्रान्तिमा कति खर्च लाग्ला ?’
बीपीले ‘२५/३० लाख लाग्न सक्ने’ बताए । ‘त्यतिले कहाँ पुग्छ’ सुवर्णले भनेछन्, ‘एक–डेढ करोड त पक्कै लाग्ला ।’ त्यसपछि सुवर्णले पार्टीका नेताहरूलाई आश्वस्त पार्दै भनेछन्, ‘चिन्ता गर्नुपर्दैन हामी दाजुभाइले एक/एक करोड बेहोर्ने सल्लाह भएको छ ।’
भारतीय र ब्रिटिस आर्मीका रिटायर्ड गोर्खा सैनिकलाई भर्ती गर्ने निर्णय गरियो । छुट्टीमा आएका गोर्खा पनि सामेल भएका थिए । जनमुक्ति सेनाको नामाकरण ज्ञानबहादुर (जीबी) याक्थुम्बाले गरे । ‘ब्ल्याक मार्केट’ बाट बाह्रबोर, स्टेनगनजस्ता थुप्रै हतियार किनियो । केही हतियार भारतीय राजनीतिक दलहरूले उपलब्ध गराए । अंग्रेज हिँडेपछि हैदराबादका निजामले आफ्नो राज्य भारतमा मिसाउन अस्वीकार गरेका थिए । भारतीय सेनाले निजाममाथि आक्रमण गरेका बेला जनतालाई पनि हतियार बाँडेको थियो । लडाइँ सकिएपपछि कतिले ती हतियार जमिनमा गाडेर राखेका थिए । तिनै हतियार किनेर मर्मत गरेर मुक्ति सेनालाई दिइयो । देहरादुनको ब्यारेकका अफिसरबाट हतियार किनिएको तामाङ सम्झन्छन् ।
तामाङ भर्खरका युवा थिए । बीपी, मातृका, सुवर्णशमशेर, महेन्द्रविक्रम शाह, पुरन सिंह, जीबी याक्थुम्वा, थिरबम मल्ल, सूर्यप्रसाद उपाध्यायको बैठकमा उनी भारतीय जेलमा रहेका जनमुक्ति सेनाका मुद्दाबारे ब्रिफिङ गर्न जान्थे । लडाकुलाई मासिक एक सय, पकेटमनी ३ रुपैयाँ हतियारसहित हिँडेका थुप्रै लडाकु बारम्बार पक्राउ पर्थे । लखनउ जेलमा मात्र दर्जनौ थुनिएका थिए । तामाङको अंग्रेजी राम्रो थियो । त्यसैले अदालतमा मुद्दा हेर्न र भारतीय पार्टीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न उनैलाई खटाइयो । ‘मुद्दा लडेर जेलमा रहेका साथीहरू छुटाउने जिम्मा मेरो थियो । भारतीय समाजवादी र कांग्रेस पार्टीबाट राम्रो सहयोग पाइन्थ्यो,’ उनी भन्छन् । कतिसम्म भने लडाकुलाई दिनभर बिरामी छ, अस्पताल लैजानुपर्छ भनेर बाहिरै राख्ने व्यवस्था मिलाएका थिए । रातमा भने जेलमै बास बस्नुपर्थ्यो । उनले त्यो बेला सिलगुडी, दरभंगा, लखनउमा दर्जनौं मुद्दाहरू हेरे । वकिल राख्ने र बन्दोबस्त मिलाउने काम गरे ।
लडाकुको घरखर्च र पकेटमनीसमेत सुवर्णशमशेर बेहोर्थे । मनीअर्डरबाट पैसा उठाउने काम तामाङले गर्थे । पुरन सिंहको घर भारत हिमाञ्चलको भागसुमा थियो । जीबी याक्थुम्बाको परिवार दार्जिलिङको खर्साङमा बस्थ्यो । लडाकुलाई आर्थिक स्थिति हेरेर मासिक एक सयदेखि २ सय ५० रुपैयाँसम्म पठाउने गरेको उनी बताउँछन् । पकेटमनी भने सबैले तीन रुपैयाँ पाउँथे । ‘सुवर्णले पुरन सिंहलाई दिन्थे । उनले घरघर पठाउन र लडाकुलाई बाँड्न मलाई दिन्थे,’ तामाङ भन्छन्, ‘झन्डै एक बर्षसम्म हरेक महिना दसौं हजार पैसा पठाएँ ।’
जनमुक्ति सेनाको अस्थायी क्याम्पमा गएर रासनपानीको पैसा पनि उनी बुझाउँथे । भर्खर विश्वयुद्ध सकिएकाले झट्ट चामल पाइँदैनथ्यो । दरभंगामा अंग्रेजले छाडेको ब्यारेक खाली थियो । तामाङसहित झन्डै १ सय ५० लडाकु त्यहाँ बस्थे । लखनउको महानगरमा सय जति थिए । चिडियाखाना छेउ कश्मीरी ब्राह्मणको घर थियो । त्यहाँ ६० जना जति बस्थे । ती सबै अस्थायी क्याम्पको व्यवस्था सुवर्णले नै गरेका थिए ।
विराटनगरमा हुँदा तामाङले एकपटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाका लागि कपडा किनिदिनुपर्ने स्थिति आयो । ‘कोइराला सेतो पइजामा र कुर्ता लगाउँथे । त्यही पाइजामा पनि घुँडाबाट फाटेछ । एक दिन जीबी याक्थुम्बाकहाँ आएर भने— जीबीजी मेरो त कपडा फाट्यो । किन्दिनुपर्‍यो । याक्थुम्बाले मतिर हेरेर ‘ल गिरिजाबाबुलाई कपडा किनिदिनुहोला’ भन्नुभयो । उनले के कस्तो कपडा किन्ने भनेर गिरिजाप्रसादलाई सोधेनन् । ‘सिधै बजार गएर उलन मिसिएको एउटा कट्राइज पाइन्ट किनेर ल्याए र गिरिजाबाबुलाई दिएँ,’ तामाङ सम्झिन्छन् ।
त्यो २००७ साल
१९५० नोभेम्बर ११ (भाइटीका) को राति ११ बजेर ११ मिनेटमा एकैसाथ वीरगन्ज, विराटनगर र झैरहवामा आक्रमण गर्ने मुत्ति सेनाको योजना थियो । वीरगन्जमा पुरन सिंह, जीबी याक्थुम्बा, थिरबम मल्लसहित श्याम तामाङ पनि खटिएका थिए । विराटनगरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र विश्वबन्धु थापा थिए । भैरहवाको नेतृत्व डा. केआई सिंहले गरेका थिए । वीरगन्ज हमला सफल भयो । राणाका १ सय ५० सिपाही बन्धक बनाइए । सबै हतियार कब्जा भए । टिनको बाकसमा रहेको ३५ लाख पनि हात पारे । भैहरवा र विराटनगर कब्जा गरेर मुक्ति सेना काठमाडौंतिर अघि बढ्यो । एकातिरबाट बनेपा धुलिखेल र अर्कोतिरबाट धादिङसम्म सेना आइपुगेपछि राणा आत्तिए ।
भारतीय डीएम र प्रहरी प्रमुखले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको खबर भन्दै ११ जनवरीमा मातृकाप्रसाद कोइराला, बीपी, सूर्यप्रसाद र सुर्वणलाई एक्सप्रेस मेलगाडी चढाएर दिल्ली पठाइदिए । १३ जनवरीमा हैदरावाद हाउसमा नेहरूले दुई दिनभित्र राणा र कांग्रेसका सात–सात जना मन्त्रीसहितको सरकार गठन गर्न सल्लाह दिए ।
‘बीपी आनाकानी गर्दै थिए,’ नेहरूले चेतावनीको शैलीमा भनेछन्, ‘राजा र मोहनशमशेर मानिसके । अब कांग्रेसले चाहेर माक्र त्रान्ति हुँदैन ।’ राजा, राणा र भारत एकातिर भएपछि कांग्रेस एक्लिएर सम्झौता गर्न बाध्य भएको तामाङको बुझाइ छ ।
२००७ फागुन ४ गते काठमाडौं गौचरनमा राजपरिवारको बाहेक दुइटा जहाज उत्रिए । दिल्लीबाट आएका यी जहाजमध्ये एउटामा कांग्रेसका नेता र सात जना मन्त्री थिए । अर्कोमा जीबी याकथुम्बा, पुरन सिंहसहित तामाङसमेत जनमुक्ति सेनाको टोली थियो । ‘एकातिर छातीभरि तक्मा लगाएका, बुट टल्काएका सेना थिए । अर्कोतर्फ हामी कपाल बढेर जिंग्रिङ्ङ भएको, जुत्ता–चप्पल लगाएका थियौं,’ तामाङले भने, ‘जनमुक्ति सेनाको त युनिफर्म पनि थिएन, आफूखुसी कपडा लगाएका थियौं । राजालाई के भन्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन । ‘जय नेपाल’ भनिदियौ । जानेको त्यही थियो ।’
दरबारबाट निस्केपछि कमलपोखरीमा रहेको थिरबम मल्लको दुईतले घरमा एउटा निर्णायक छलफल भयो । त्यही छलफलमा बीपीले जनमुक्ति सेनालाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको तामाङ बताउँछन् । ‘बीपीले भारतमा सुवासचन्द्र बोसको आजाद हिन्द फौजलाई राष्ट्रिय सेनामा नलिएको उदाहरण पेस गर्दै जनमुक्ति सेनालाई पनि खारेज गर्नुपर्ने बताएका थिए,’ तामाङ स्मृतिमा फर्किन्छन्, ‘लडाकु कमान्डरले भने चीन वा रसियाको रेड आर्मीजस्तै राखौं भन्ने अडान लिए ।’ राष्ट्रिय सेनाकै नाम जनमुक्ति सेना नाम राख्नुपर्ने तर्क पनि थियो । ‘हामीसँग हरेक मोर्चामा हारेको सेनालाई हामीले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने माग थियो,’ तामाङ भन्छन्, ‘नयाँ सरकारका गृहमन्त्री बीपीले मानेनन् ।’ प्यारामिलिटरी ‘रक्षा दल’ बनाउने प्रस्ताव आयो । २००७ साल फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले रक्षा दल गठनको निर्णय गर्‍यो ।
२००७ सालको क्रान्ति ६८ वर्षमा पुगेको छ भने तामाङ ८८ वर्षमा । रक्षा दल गठन भएपछि कमान्डरहरू पुरन सिंह, जीबी याक्थुम्बा, बद्रीविक्रमलगायत अञ्चलाधीश भए । रक्षा दललाई नेपाल प्रहरीमा रूपान्तरण गरिएपछि तामाङ पनि प्रहरी बन्न पुगे । २०१७ मा राजा महेन्द्रको ‘कू’ पछि राजनीति फेरियो । प्रजातन्क्रका लागि त्रान्तिको नेतृत्व गर्ने बीपी कोइराला, गणेशमानलगायतका नेताहरूलाई जेल हालियो भने पञ्चहरूले सत्तामा राइँदाइँ गरे ।
महेन्द्रको ‘कू’ विरुद्ध बीपी र सुवर्णशमशेरले पुनः सशस्क्र त्रान्तिको प्रयास गरे । ‘जितिसकेको क्रान्ति छाडेर कांग्रेस सत्तामा पुगेको थियो । त्यसैले उसले चहादैमा अर्को क्रान्ति हुने स्थिति थिएन । हामीले सजिलै निस्तेज पार्‍यौं,’ नेपाल प्रहरीको डीएसपीका रूपमा २०२४ सालमा सेवानिवृत्त भएका तामाङले भने । राजनीतिबाट टाढा पुगेका तामाङ अहिले नेपालगन्जमा बस्दै आएका छन् । उनको ‘जनमुक्ति
सेना ः एउटा नलेखिएको इतिहास’ पुस्तकसमेत प्रकाशित छ ।
झmन्डै ३ महिनामा टुंगिएको २००७ सालको क्रान्तिमा जनमुत्ति सेनाका १६ जना मारिए । त्यसपछि कांग्रेसका धेरैवटा सरकार बने । तर, प्रजातन्क्रका लागि त्रान्तिमा ज्यान गुमाएका लडाकुलाई नसम्झिएकोमा तामाङको ठूलो चित्तदुखाइ छ । भन्छन्, ‘देशमा हजारौं सहिदको सूची छ । ती १६ भाइको नाम कतै छैन,’ उनी दुखेसो गर्छन्, ‘बीपी र गिरिजाबाबुले त जनमुक्ति सेनालाई सम्मान दिएनन्, अब झन् कसले देला ?’
प्रकाशित : चैत्र ९, २०७५ १२:२१